အိန္ဒိယရဲ့ အရှေ့မျှော်မူဝါဒနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်မယ့် ချင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု | Chin World
အိန္ဒိယရဲ့ အရှေ့မျှော်မူဝါဒနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်မယ့် ချင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု
Home » Article » အိန္ဒိယရဲ့ အရှေ့မျှော်မူဝါဒနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်မယ့် ချင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု
By Lal Nun Uk on November 9, 2016.	No Comments
(အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် မြန်မာဘက်မှ အိန္ဒိယသို့ ကုန်စည်များသယ်ဆောင်လာစဉ်၊ ဓာတ်ပုံ Pyay Kyaw Aung/Irrawaddy)
အမှန်စင်စစ် အိန္ဒိယ၏ အရှေ့မျှော်မူဝါဒဆိုသည့် အသံကြားဖူးနေတာ ကြာပြီ။ မူဝါဒ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းသည့် အိန္ဒိယ၏ အရှေ့မြောက်ဒေသပြည်နယ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင် တည်ဆောက်ပြီး မြန်မာမှ တဆင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ကူးလူးဆက်ဆံရန်ဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် ကုလားတန်စီမံကိန်းကလည်း ချင်းပြည်နယ်ကိုဖြတ်၍ စစ်တွေတွင် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး ကုန်းတွင်းပိတ် အရှေ့မြောက်ပြည်နယ်များအတွက် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ ထွက်ပေါက်ကို ရှာပေးရန် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ နှစ် ၊ နှစ် ၂၀ မှ စတင်ရန် တဆာဆာ အော်နေခဲ့သည့် အဆိုပါ စီမံကိန်းများမှာ ယခု ၂၀၁၆ ကုန်သည်အထိ မပြီးစီးသကဲ့သို့ အကောင်ထည်ဖော် မလာခဲ့ပါ။ စီမံကိန်းနှင့် မူဝါဒများ ကြန့်ကြာရသည့် အကြောင်းအရင်းများတွင် အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ဒေသ မငြိမ်းချမ်းမှုမှာ အကြောင်းပြချက် တစ်ရပ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း အိန္ဒိယ အနေဖြင့် ငွေကြေးရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွင် အလုံးအရင်း အသုံးပြုနိုင်မှု နည်းပါးခြင်းကလည်း မူဝါဒ မအောင်မြင်မှု၏ အဓိက ကျသည့် အချက်အနေဖြင့် ရှိနေပါသည်။
အိန္ဒိယ၏ အရှေ့မြောက်ပြည်နယ်များ ဆင်းရဲသလို အရှေ့မြောက်ဒေသနှင့် ဆက်စပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံမှ နာဂတောင်တန်းဒေသ ၊ ချင်းပြည်နယ်တို့မှာလည်း ဆင်းရဲပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်သော ဒေသများသာ။ အရှေ့မျှော်ဝါဒ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာကိုဖြတ်၍ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံရန်အပြင် မဟာပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည့် တရုတ်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို တန်ပြန်ရန် ဖြစ်သည်ဟု လေ့လာသူ အချို့က ဆိုကြသည်။ ယင်းသို့ စီစဉ်ထားလင့်ကစား မြန်မာတွင် အိန္ဒိယ၏ အနေထားမှာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုတွင် တရုတ်ထက် သာသည်က လွှဲ၍ စီမံကိန်းအများစု ကူးလူးဆက်ဆံမှု အများစုမှာ တရုတ်၏ နောက်တွင်သာ အိန္ဒိယ အနေဖြင့် ရှိနေပါသည်။ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် တစ်လျှောက် ကားလမ်းမများမှ တဆင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုက မြန်မာအတွက် အမြင့်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်နေချိန်တွင် တမူး ၊ ရိဒ် စသည့် ဒေသများတွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်စခန်းများ ရှိနေသော်လည်း အိန္ဒိယမှာ မြန်မာ၏ ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံများအနက် စတုတ္တ အဆင့်သာရှိနေပါသည်။
သို့သော် ပြည်သူအများ၏ အမြင်တွင်မူ တရုတ်ထက် စာလျှင် အိန္ဒိယအား မိတ်ဆွေအဖြစ် ရှူမြင်မှုကတော့ ရှိနေသည်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် မြန်မာခေါင်းဆောင်များနှင့် အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်များ အတူကြိုးစားခဲ့မှု ၊ အရေးကြုံလာသည့် ရန်ကုန်လောက်သာ အုပ်ချုပ်နိုင်တော့သည့် ပါလီမန်ခေတ်မြန်မာအစိုးရအား အိန္ဒိယမှ အကူညီပေးခဲ့မှု ၊ မြန်မာအား တကြိမ်တစ်ခါမျှ ကျူးကျော်ခဲ့ခြင်းမရှိမှု ၊ မြန်မာပြည်မှ လူများစု ကိုးကွယ်သည့် ဗုဒ္ဒဘာသာမှာ အိန္ဒိယမှ ပေါ်ပေါက်လာမှုတို့မှာ မြန်မာပြည်မှ လူအများစုအတွက် အိန္ဒိယမှာ ဆွေမျိုး မိသင်္ဂိဟသဖွယ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့် အချက်များပင်။ သို့သော် အိန္ဒိယ အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍မူ ဘောလိဝုဒ် ၊ ဗုဒ္ဒဂါယာတို့မှလွှဲ၍ ခေတ်သစ် အိန္ဒိယ အကြောင်းကို မြန်မာတို့ သိပ်မသိသည်မှာလည်း အသေချာပင်။ ယင်းအချက်မှာ နှစ်နိုင်ငံ ကူးလူးဆက်ဆံမှု နည်းပါးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ မြန်မာပြည်ရှိချင်းတိုင်းရင်းသားများနှင့် မျိုးနွယ်စုခြင်းတူသည့် မီဇိုရမ်ကဲ့သို့ ပြည်နယ်ရှိနေသော်လည်း အများစုမှာ အိန္ဒိယသို့ တိုက်ရိုက်သွားခြင်းမဟုတ်ပဲ မလေးရှားကဲ့သို့ နိုင်ငံမျိုးတွင်လည်း ချင်းမျိုးနွယ်စု အများစုရှိနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဆိုလျှင် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အဓိကထား သွားကြသည့်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား သန်းနှင့်ချီ ရှိနေသည်။
သို့သော် မကြာသေးမှီက အိန္ဒိယ ၀န်ကြီးချုပ်က ADD East ဆိုပြီးအ ကောင်ထည်ဖော်ရန် ကြွေးကြော်လာသည်။ သည်တကြိမ်တွင်တော့ အိန္ဒိယ အနေဖြင့် တကယ် လက်တွေ့ ကြိုးပမ်းလာသည့် လက္ခဏာများလည်းတွေ့မြင်နေရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တရုတ်မှာ မြန်မာပြည်သူများ မကြိုက်လင့်ကစား အချို့ မူဝါဒများကို ပြင်ဆင်ကာ ပိုးလမ်းမဟောင်း စီမံကိန်းနှင့်အတူ တရုတ်မြန်မာ ကော်ရစ်ဒါ စီမံကိန်းဖြစ်သည့် ကျောက်ဖြူ ကူမင်း မဟာဗျူဟာ လမ်းကြောင်းကို အလျင်အမြန် အကောင်ထည်ဖော်ရန် ကြိုးစားလာသောကြောင့်ပင်။ အိန္ဒိယ အနေဖြင့် မြန်မာအပေါ် ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်လာရန် ကြိုးပမ်းမှုမှာ အချက် ၃ ချက်ဖြင့် ကြည့်လျှင်ပင် သိသာပါသည်။ အစိုးရသစ် တက်ပြီးနောက် မြန်မာသမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် နိုင်ငံ၏ တရားဝင် အာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သော်လည်း အစိုးရအဖွဲ့အား အဓိက မောင်းနှင်နေသူဟု ယူဆထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့မှာ အိန္ဒိယသို့ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဦးထင်ကျော်တကြိမ် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တကြိမ် သီးသန့်စီဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ ပြင်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိန္ဒိယ ခရီးစဉ်အတွင်းတွင် အခြေခံ အဆောက်ဦးများ မြင့်တင်ရန်အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁. ၈ ဘီလီယံ စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းပမာဏာမှာ အိန္ဒိယ မြန်မာ ဆက်ဆံရေးသမိုင်းတစ်လျှောက် တကြိမ်တည်းနှင့် ပမာဏအများဆုံး စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် ပမာဏ ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက် နှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျင့်သုံးနေသည့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ အကူအညီပေးရေးအစီစဉ်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။
(မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး၏ အဓိကလမ်းမကြီး ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ် လမ်းပိုင်းတစ်နေရာ၊ ဓာတ်ပုံ-Pyay Kyaw Aung/Irrawaddy)
ကုလားတန် စီမံကိန်းပင်ဖြစ်စေ ၊ အရှေ့မျှော်မူဝါဒ ဖြစ်စေ ၊ ADD East ဟု ပင်ခေါ်ခေါ် ချင်းပြည်နယ်နှင့် အားလုံး ဆက်စပ်သည့် အရာများပင် ဖြစ်သည်။
ကုလားတန် စီမံကိန်းမှာ ချင်းပြည်နယ်နှင့် အိန္ဒိယ နယ်စပ်မှ ကားလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်ကာ ပလက်ဝမှ တဆင့် ရေကြောင်း ကားလမ်းတို့ဖြင့် စစ်တွေရှိ ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှု ဇုံများ ၊ ကုန်သေတ္တာစခန်းများ အဝေးပြေးလမ်းမ စီမံကိန်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းမှာ ထိထိရောက်ရောက်ဖော်ဆောင်နိုင်ပါက ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲပြီး သီးသန့်ဆန်ကာ အထီးကျန်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည့် ပလက်ဝ ဒေသမှာ စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးလာဖွယ်ရှိနေသည်။ ကျောက်ဖြူ ကူမင်းလမ်းကြောင်းတွင် တရုတ်မှ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့စတင်ပို့လွှတ်နေပြီဖြစ်ပြီး ဆိပ်ကမ်းနှင့် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် တရုတ်စီမံကိန်း၏ ထုံးစံအတိုင်း ဒေသခံများ၏ မြေယာလျော်ကြေးကဲ့သို့ ကိစ္စများအပါဝင် ဒေသခံများ ကန့်ကွက်မှုများ ရှိနေဆဲ။ အိန္ဒိယအနေဖြင့်မူ နောက်ကျသူဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း တရုတ်အနေဖြင့် မြန်မာတွင်မှားခဲ့သည့် အမှားများကို ရှောင်ရှားနိုင်စရာ ကိစ္စရပ်များလည်း ရှိနေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက မြေယာလျော်ကြေးများကို ဒေသခံများထံ ထိုက်တန်သည့် လျော်ကြေး တိုက်ရိုက်ပေးခြင်း ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဒေသခံများအနည်းဆုံး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက် ၀န်ထမ်းများအဖြစ် ခန့်အပ်ထားခြင်း အစရှိသည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဒေသခံများနှင့် တန်းတူရည်တူဆွေးနွေးမှု ကျင့်ဝတ် အခြေခံ စီမံကိန်း အကောင်ထည်ဖော်မှုများမှာ အရေးပါလာမည်ဖြစ်သည်။ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ချင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစ်ညးများ ၊နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့်မူ ဒေသတွင်း ကူးလူးဆက်ဆံမှုနှင့် ဆက်ဆံရေးအပါဝင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် စီမံကိန်းများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် မိမိဒေသအတွင်း ပညာတတ်မည်မျှရှိသည်ဆိုသည့် အရေအတွက်ကအစ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်တတ်မြောက်သူ အရေအတွက် အဆုံး အချက်လက်များ ရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းများမှာ ဗဟိုအစိုးရကသာ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသော်လည်း မှတ်ချက်ပြုရန်မှာ အောက်ခြေ ပြည်နယ်အစိုးရတွင် တာဝန်ရှိသည် မဟုတ်ပင်လော။
ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကို ကြည့်လျှင်လည်း ရိဒ်နယ်စပ်ကဲ့သို့ ကုန်သွယ်မှု စခန်းများ ရှိသော်လည်း ကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာနည်းလွန်းလှသည်။ မြန်မာဘက်မှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှု အပြင် အိန္ဒိယဘက်မှလည်း မီဇိုရမ် မြို့တော အိုက်ဇောမှ လာလျှင်ပင် ဘတ်ဂျက်ပိုရလာတော့မည့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုအတွက် အရေးပါသည့် အခြေခံ အဆောက်ဦးကောင်းမွန်မှုအတွက် ဦးစားပေးသင့်သလို အခြားသော ဟိုတယ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဲ့သို့ ကဏ္ဍများအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ ၀န်ဆောင်မှုနှင့် လည်ပတ်စရာဖန်တီးပေးမှုနှင့် ဘာသာစကား တတ်မြောက်မှုအပေါ် အခြေခံသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ရာ မူလက အခြေခံပညာနှင့် ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းမှုအရ အဆင့်နိမ့်ခြင်း မရှိလှသော ချင်းတိုင်းရင်းသားများအတွက် အလားအလာကောင်းမွန်သည့် လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အိန္ဒိယ မြန်မာနယ်စပ်မှ နယ်စပ်နေပြည်သူများ သွားလာနိုင်သော်လည်း ထိုင်း နယ်စပ်ကဲ့သို့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများပါ တရားဝင် ၀င်ထွက်ခွင့်ပေးမည် ဆိုပါက ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အလားအလာအကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်နှင့် ဆက်စပ်မည်ဆိုလျှင် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းရှိ အင်ဖာ ၊ ကိုဟီးမား ၊ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရှားလုံးခံတပ်တို့မှာ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အရေးပါသည့် ဒေသများဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းဒေသများအတွင်း ဆက်စပ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ပါက ထိုင်းနိုင်ငံက ကန်ချနာပူရီဒေသ ( သေမင်းတမန် ရထားလမ်း အခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း ) ကဲ့သို့ ပင် အလားလာကောင်းမွန်သည့် နယ်မြေဖြစ်လာနိုင်သည်။ မီဇိုရမ် ဒေသမှာ သီးခြား ဖက်ဒရယ် ပြည်နယ်ဖြစ်သည့်အတွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ေ၇းနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေ တင်းကျပ်မှု အချို့ရှိသော်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဲ့သို့ ကိစ္စရပ်များမှာ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအချင်းဖြစ်စေ ဒေသဆိုင်ရာအ စိုးရအချင်းချင်း ဆက်နွယ်မှုအရ ဖြစ်စေ ထောက်ခံမှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ဒေသအတွက်ကော ချင်းပြည်နယ်အတွက်ပါ အကျိုးများမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပေသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဒေသခံများ အလုပ်အကိုင် ပိုမိုရရှိေ၇း ဒေသတွင်း အလယ်အလတ်လုပ်ငန်း၇ှင်များ ပိုမိုပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်မူ ပြင်ဆင်မှု တစ်ရပ်တော့ရှိရန်လိုအပ်ပေသည်။ သို့မှသာလျှင် ပုဂံညောင်ဦးဒေသခံများ ကြုံတွေ့ရသလို မကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ပုဂံညောင်ဦးဒေသတွင် ဟိုတယ်များ အပြိုင်အဆိုင် ဖွင့်လာကြသော်လည်း နောက်ပိုငးဖွင့်သည့် ဟိုတယ်ကြီးများမှာ ၀န်ထမ်းများပါ ရန်ကုန်ကဲ့သို့ နေရာများမှ ခေါ်လာခြင်းဖြစ်ရာ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များ မကြုံတွေ့စေရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့ လိုပေသည်။အနည်းဆုံး ဒေသတွင်းမှ ၀န်ထမ်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရမည် စသဖြင့် စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုနိုင်ရန်ပါ ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။ တိုရစ်ဇင်လုပ်ငန်းအတွက် ၀ိတိုရိယတောင်ကဲ့သို့ဒေသများ ဘုံတလာဒေသများကိုလည်း ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဒေသစာရင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ေ၇းအတွက်ပါ တပါတည်းပြင်ဆင်ထားသင့်ပြီး တိုင်းရင်းသား ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အထောက်အကူပြုစေမည့် တိုင်းရင်းသား ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အခြေပြု ကျေးရွာများကိုလည်း သီးသန့် ဖန်တီး၍သော်လည်းကောင်း သဘာဝအတိုင်းရှိနေသည့် ကျေးရွာများကို ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်၍ ထိန်းသိမ်းမှုသော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ထားသင့်ပေသည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း အထူးအလေးပြုရတော့မည့် အခြေနေတရပ်ပင်။နိမ့်ကျနေသည့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုအဆင့်မြင့်တင်ရာတွင်လည်း မည်သည့် သီးနှံက အရေးပါသည်ဆိုသည့် မိမိစားသုံးရန်အတွက်သာမက ဈေးကွက်ဝင်မည့် သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ထားသင့်ပါသည်။
(အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ချင်းအနွယ်ဝင် မီဇိုလူမျိုးများနေထိုင် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် အိုင်ဇောလ်မြို့အားတွေ့ရစဉ်)
အိန္ဒိယ မြန်မာ ဆက်သွယ်မှု အဓိက လမ်းကြောင်းဖြစ်သည့် အင်ဖာ – မိုရေး မှ ကလေးတမူး၊ ယင်းမှ တဆင့် မန္တလေးသို့ ဆက်သွယ်မည့် လမ်းကြောင်းမှာလည်း ချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်သည့် ကလေးနှင့် မြောက်ပိုင်းဒေသအတွက် အရေးပါသည့် လမ်းကြောင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းလမ်းကြောင်းရှိ တံတားများပြင်ဆင်ရန် အိန္ဒိယက ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ရာ ကူးသန်းသွားလာရေးလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လာပါက ချင်းပြည်နယ်နှင့် ကျန်သည့် ဒေသများသွားလာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာဖွယ်ရှိပါသည်။ ယင်းအပြင် ပြည်မမှ အခြေချနေထိုင်သူများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အစီစဉ်တစ်ရပ် ချင်းအင်အားစုများမှ စတင်စဉ်းစားသင့်သည်ဟု အကြံပြုလိုပါသည်။ မကြာသေးမှိကပင် တပ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်က ကချင်တွင် ဗမာ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက် ၊ရှမ်းတွင် ဗမာရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်ဟု ပြောခဲ့သည်မဟုတ်ပေလော။ အကယ်၍ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း စီမံကိန်းကြီးများပေါ်ပေါက်လာပြီး ကူးလူးဆက်ဆံမှုများလာပါက ပြည်မမှာ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက် ပေါ်လစီ တရပ်ရှိရန်လိုအပ်ပေသည်။ အဓိက အရင်းခံမှာ ဒေသတွင်းနေ မူလဌာနေ တိုင်းရင်းသားများ နစ်နာမှုမရှိစေရန် မဟုတ်ပေလော။
ချင်းပြည်နယ်၏ အဓိက အားသာချက်မှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိသည့် ဒေသဖြစ်ရာ ယင်းအခြေနေမှာ ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အားသာချက်ဖြစ်သည်။ အရှေ့မြောက် အိန္ဒိယ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက အတားအဆီးဖြစ်သည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းနိုင်လျှင် ဒေသတွင်း မူးယစ် ဆေးဝါး ပြဿနာကိုပါ အလိုအလျှောက် ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယအကြား အားပြိုင်မှုမှာ ပြည်မတွင်သာမက ချင်းပြည်နယ်တွင်လည်း ရှိသည်ဟု စာရေးသူ ဆိုချင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ချင်းပြည်သူ အများစု ကန့်ကွက်နေသည့် မြွေတောင် ဖားတောင် စီမံကိန်းမှာ တရုတ်စီမံကိန်းသာဖြစ်သည်။ သို့သော် အိန္ဒိယ၏ အားသာချက်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးသူ ပီပီ ပြည်သူ ကန့်ကွက်သည့် စီမံကိန်းဆိုလျှင် လိုအပ်ပါက ဖျက်သိမ်းပေးတတ်သည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ချင်းတွင်းမြစ်ပေါ်ရှိ ရွှေစာရေးနှင့် ထမံသီစီမံကိန်း ( ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ဆည် ) များကို အိန္ဒိယဘက်က ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်မှုအတွက် အိန္ဒိယ ရင်းနှိးမြှပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းများလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ တက္ကနိုလိုဂျီ မနိမ့်လှသော အိန္ဒိယမှာ ဆူကမ်းကဲ့သို့ ကုမ္ပဏီများက ဆိုလာစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပေးလုပ်ငန်းများ အောင်အောင်မြင်လည်ပတ်ထုတ်လုပ်နေသည့် အစဉ်အလာရှိသည့် နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပေသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုလျှင့်တရုတ်၏ မြန်မာအပေါ် အရှိန်မြင့်တင်လာမှုနှင့်အတူ အိန္ဒိယကလည်း အရှေုမြောက်ဒေသတည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြန်မာကို မုချ အသုံးချပေတော့မည်။ ယင်းအစီအစဉ်မှာ ယူတတ်လျှင် ချင်းပြည်နယ် လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက် အရေးပါလှသည့် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။